I-Cabin Enhle e-Mar de Coveñas Condominium - I-Airbnb
I-Cabin Enhle e-Mar de Coveñas Condominium
Coveñas, Sucre, i-Colombia
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Gloria Beatriz
U-Gloria Beatriz Ungumbungazi ovelele
I-Cabin 25 itholakala kahle kakhulu e-Ensenada yokuqala. Yindawo ethule kakhulu, efakwe ngokugcwele isiqandisi, i-microwave, umshini wokuwasha, ama-air conditioner ekamelweni ngalinye, namafeni egumbini lokuphumula - igumbi lokudlela, omabonakude ababili, okokusebenza okuzwakalayo, okokukhipha amanzi abandayo, umthombo ongemuva wokugeza izandla nokulengiswa. izingubo kanye konke okudingayo ukuze ube ne-ukuhlala kakhulu. Inechibi lezingane, ichibi labantu abadala, ithala lamabhiliyade nendawo yokosa inyama.
Le ndlu lapho i-cabin itholakala khona inolwandle oluzolile kakhulu namabhishi amahle e-coral sand, enezihlahla zesundu ezikuvumela ukuba ujabulele umthunzi noma ilanga ngokuthanda kwakho. Umkhathi we-condominium ujwayeleke kakhulu futhi abasebenzi bahlale bekulungele ukusiza isivakashi nganoma yiluphi ulwazi noma imibuzo, njengoba kuyisitezi sokuqala, ukunyakaza kwabantu asebekhulile noma abantu abahamba kancane kuyasiza.
4.77 · 69 okushiwo abanye
Ikhaya likaGloria liseCoveñas, eSucre, eColombia eGulf of Morrosquillo
Ibhishi le-Ensenada yokuqala liyindlela engcono kakhulu kulabo abafuna ukuphumula, ukuzijabulisa nokujabulela amanzi oLwandle lweCaribbean.
Itholakala emaminithini ambalwa ukusuka edolobheni lapho ungathola khona izitolo ezinkulu, izindawo zokudlela kanye nezinye izinkonzo.
Indawo futhi ilungele labo abafuna ukuvakashela izindawo ezikhanga izivakashi eziyinhloko endaweni:
- I-San Bernardo archipelago eneziqhingi ezingu-8 ezihlanganisa isiqhingi saseMúcura, isiqhingi sasePalma kanye nesiqhingi saseTintipán se-pristine nesihlabathi se-coral imizuzu engu-45 ngesikebhe esisuka eTolú.
- I-Santa Cruz del islet isiqhingi esinabantu abaningi emhlabeni ngemitha-skwele ngayinye
- Ciénaga de la Caimanera - imizuzu eyi-10 ngemoto
-Intabamlilo yodaka i-El Tesoro - imizuzu engama-20 ngemoto
-Imizuzu engama-30 ngemoto
- Umthombo wedwala eColoso - imizuzu engama-55 ngemoto
-Intaba-mlilo yodaka eSan Antero
- Idolobhana lokudoba laseSan Antero imizuzu eyi-15 ngemoto
-Cienaga de Tortugas imizuzu engu-25 kude
-Punta Bolívar kanye ne-Playa Blanca imizuzu engu-30 ngemoto
Ibungazwe ngu-Gloria Beatriz
Noma yimiphi imibuzo emayelana nekhondomu kungaboniswana nomlawuli
UGloria Beatriz Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 82208